हामी यति सङ्कीर्ण अवधारणा लिएर बाच्छौँ कि आफु भन्दा फरकलाई पनि हामी झुटा शिक्षा भन्न पछि पर्दैनौं । | Nepali Christians
हामी यति सङ्कीर्ण अवधारणा लिएर बाच्छौँ कि आफु भन्दा फरकलाई पनि हामी झुटा शिक्षा भन्न पछि पर्दैनौं ।
October 4, 2014 3:00 pm by: Nepali Christians Category: Interviews A+ / A-
ललितपुर ठैव स्थित इम्मानुयल बाइबल कलेज एण्ड सेमिनारीमा प्राध्यापन सेवा गर्दै आउनुभएका शिक्षक, लेखक तथा अनुवादक श्री कमल अधिकारि ज्यु संग तुरहीको सह-सम्पादक निराजन मोक्तानले गरेको अन्तरंग अन्तर्वार्ता :
♦ तपाइँ के केमा आबद्द हुनुहुन्छ अहिले ?
→म आफुलाई मूलतः अनुवादक भन्न रुचाउँछु । त्यसपछि शिक्षक अनि लेखक । ललितपुरको ठैबस्थित एउटा बाइबल कलेजमा विगत नौ वर्षदेखि पढाउँदै आएको छु जुन इन्स्टिच्युटमा शिक्षक हुनुभन्दा अगि म आफैंले विद्यार्थीको रूपमा दुई वर्ष बिताएको थिए।
♦अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नको लागि अङ्ग्रेजी भाषा पनि राम्ररी जानेको हुनुपर्छ । कहाँ र कसरी सिक्नुभयो ?
→म कक्षा एकमा र आठमा एक एक पटक गरी दुई पटक फेल भएकोले मैले जम्माजम्मी बाह्र वर्ष स्कुले जीवन बिताएको छु । माध्यामिक तहमा आइपुग्दासम्म म गणितमा निक्कै अब्बल विद्यार्थी भए तापनि अङ्ग्रेजीमा साह्रै कमजोर । जीवनमा एउटा कुरोको सधैं पिर परिरहन्थ्यो— के मैले एस. एल. सी. पास गर्न सक्छु त ? एस. एल. सी. को नतिजा हात परेपछि थाहा भयो कि मेरो अङ्ग्रेजीमा ३४ आएछ । त्यो बेला ३२ आए पास हुन्थ्यो । मलाई राम्ररी याद छ कि यदि अङ्ग्रेजी विषयमा परीक्षा कोठाभित्र कुनै एक जना अपरिचित शिक्षकले व्याकरणहरू नसिकाइदिएको भए मैले दोहो¥याएर जा“च दिनुपर्ने हुन्थ्यो । म यति कमजोर थिएँ कि आइ वान्टु टु इट राइस भनेर म अङ्ग्रेजी भाषामा मौलिक रूपमा व्यक्त गर्न सक्दिनथे“ । स्कुले जीवनको समाप्तिपछि काठमाडौ“को एउटा बाइबल स्कुलमा दुई वर्ष बिताएँ जहाँ अङ्ग्रेजी भाषाको महत्व, राम्ररी सिक्ने अवसर मिल्यो । भारतबाट आएका एक जना पाहुना शिक्षकको अद्वितीय शिक्षाको आकर्षणले गर्दा तिनैको कलेजमा गई मैले चार वर्ष बिताएं । त्यहीं नै मैले आफुलाई तिखार्ने मौका पाएँ अनि अङ्ग्रेजी विकास र बाइबलिय ज्ञानको उत्थानको लागि मैले बिध्यार्थिकै रूपमा स्वेच्छिक अनुवादको थालनी गरें ।
♦ तपाईंलाई अनुवादमा लाग्न के कुराले प्रेरित गर्यो र अनुवादमा हालसम्म तपाईंको सफलता अर्थात् कति ओटा पुस्तक पुस्तिकाहरू अनुवाद गरेर सक्नुभयो ?
→म दक्षिणी भारतको बाइबल कलेजमा तेस्रो वर्षको विद्यार्थीको रूपमा अध्ययन गर्दै थिएँ । लाइब्रेरीमा येशूको दोस्रो आगमनको विषयमा प्रश्नोत्तर ढांचामा लेखिएको यति राम्रो पुस्तक फेला परें कि म त्यसलाई अनुवाद गर्न कस्सिएं l दुई ओटा अपेक्षासहित— अङ्ग्रेजीमा उन्नति पनि हुने र दोस्रो आगमनसम्बन्धी ज्ञान पनि बढ्ने । यसरी येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनबारे जान्ने मेरो तीव्र इच्छालाई त्यो किताबले सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्यो मलाई अनि कम्मर कसें र कलेजको पढाइ सकेर नेपाल फर्के पछि मात्र मैले त्यस अनुवादलाई फत्ते गर्न सकें । एकातिर अनुवादमा खर्चेको समयअनुसार पारिश्रमिक पनि राम्रै पाइने अर्कोतिर किताबको ज्ञान पनि हुने साथै अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषाको ज्ञानमा पनि वृद्धि आउने देखेर म त्यसमा मोहित भएँ । कहिल्यै अल्छि लागेन । मैले कति ओटा पुस्तक-पुस्तिकाहरू अनुवाद गरिसकें भनेर त्यसको अभिलेख राख्दै आएको छ । सोमुताबिक झन्डै तिन दर्जनको सङ्ख्या पुगिसकेछ ।
♦ अरू कुनै सङ्घ संस्था, मिसन, मण्डली या प्रकाशकले तपाईंलाई कुनै किताब अनुवाद गर्न प्रस्ताव गरे भने के भन्नुहुन्छ नि ?
→पुस्तक अनुवाद कहिल्यै पनि सत प्रतिशत सही नहुेन भए तापनि मलाई अनुवाद आफैंमा रमाइलो पक्ष लाग्छ, सायद म ज्ञान प्राप्तिको अनुरागी भएकोले पनि पनि होला । मैले विगतमा आफुले काम गर्ने संस्थाका सामग्रीहरू बाहेक अन्य संस्थाका पुस्तक पुस्तिकाहरू पनि अनुवाद गरेको छु । दिल मनले खाने भो भने अनुवाद गर्नको लागि म जसरी पनि समय छुट्टयाउंछु । अझ आफुले मन पराएको विषय हुनुपर्छ, त्यसको मज्जा नै छुट्टै हुन्छ ।
♦ तपाईं आफूलाई अपोलोजिस्ट भन्न रुचाउनुहुन्छ । के हो यो भनेको ?
→ख्रीष्टियान शिक्षाका विभिन्न पाटाहरू छन् जसमध्ये एउटा पाटो हो- अपोलोजेटिक्स । यसलाई मैले रक्षाशास्त्र भनेर अनुवाद गर्दै आएको छु । यसले ख्रीष्टियान विश्वासको तर्कसंगत वकालत गर्ने काम गर्दछ । त्यसरी ख्रीष्टियान आस्थाको तर्क सङ्गत तवरले रक्षा गर्ने व्यक्तिलाई नै अपोलोजिस्ट (रक्षाशास्त्री) भनिन्छ । परमेश्वरको अस्तित्व, ख्रीष्टको ईश्वरत्व, ख्रीष्टको कन्याबाटको जन्म, उहाँका आश्चर्यकर्महरू, उहाँको शारीरिक पुनरुत्थानसाथै बाइबलको ऐतिहासिकताजस्ता विषयहरूमा प्रश्नको बज्रपात भइरहेको यस युगमा रक्षाशास्त्रले वैज्ञानिक, गणितिय, ऐतिहासिक,पुरातात्विक रतार्किक रूपमा जवाफहरू उपलब्ध गराउने काम गर्दछ जुन आजको पुस्तालाई नितान्त आवश्यक पनि छ ।
♦ तपाईंका अगिल्ला दुई ओटै पुस्तक यही विषयमा केन्द्रित छ भन्नुहुन्छ । के छ तिनको सार ?
→बाइबल, विज्ञान र परमेश्वर नामक मेरो पहिलो पुस्तकले रक्षाशास्त्रका विभिन्न पाटाहरूलाई ओगटेको छः बाइबलको अद्वितीयता, परमेश्वरको अस्तित्वबारे वैज्ञानिक साक्षीहरू, ख्रीष्टको ईश्वरत्वसाथै नरकको अस्तित्व आदि । दोस्रो पुस्तक (प्राचीन बाइबलका लागि आधुनिक साक्षीहरू) मूलतः बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्नाका लागि हामीसंग के –कस्ता वस्तुगत साक्षीहरू छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । तुलनात्मक रूपमा ठुलो यो पुस्तक तिस अध्यायमा विभाजित छ जसले बाइबलमाथि विश्वास गर्नको लागि साक्षीका विभिन्न रूपहरूलाई अगि सारेको छः
⇒शताब्दीऔं अगि भनिएका भविष्यवाणीहरू पुरा भएका छन् ।
⇒बाइबलमा हामी अनगिन्ती वैज्ञानिक तथ्यहरू पाउँ छौं जुन वचन लेखिदा त्यसबारे वैज्ञानिक जगत् अज्ञात थियो ।
⇒अनगिन्ती पुरातात्विक खोजहरूले बाइबलका घटनाहरू, पात्रहरू, संस्कृतिहरूको पुष्टि गरेका छन् ।
⇒बाइबलमा हामी वmुनै पनि सैद्धान्तिक, ऐतिहासिकसाथै भौगोलिक त्रुटि पाउदैनौं ।
⇒इतिहासमा सबैभन्दा बढी खेदो गरिएको पुस्तक बाइबल भए तापनि यो सर्वत्र प्रचार प्रसार भइरहेको छ ।
⇒यसले मानवसभ्यतालाई जुन टाकुरामा पु¥याएको छ त्यसको निम्ति मानव–जाति सधैं ऋणी हुनुपर्छ ।
♦ तपाईंले भर्खरै तेस्रो पुस्तक बजारमा ल्याउनुभएको छ प्रेरक प्रसङ्गहरूको नाउँमा । मूल रूपमा त्यसमा के छ ?
→रक्षाशास्त्रसंग यसको केहि सरोकार छैन । यो मूल रूपमा १०१ ओटा रोचकसाथै प्रेरक सन्दर्भहरूको संगालो हो । ती कथासाथै प्रसङ्गहरूलाई पढ्दा परमेश्वरको असाधारण कामलाई देख्न सकिन्छ र हामीलाई पनि केहि गर्ने उर्जा मिल्छ । त्यसैले झन्डै तिन वर्ष लगाएर सङ्कलन गरेका ती प्रसङ्गहरूलाई हाल पुस्तकको रूपमा बजारमा ल्याएको हुँ।
♦तपाइ बाइबल कलेजमा प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेको बिद्यार्थी र पहिलेको बिध्यर्थिमा ?
→पहिलेका विद्यार्थीहरूमा सेवा–कार्यमा होमिनुपर्छ भन्ने दर्शन हुन्थ्यो भने अहिलेकाहरूमा त्यसको कमी भएको हो भन्ने कुरा हाम्रो रिकर्डले देखाउंछ ।
♦ कतै तपाईहरु भित्र भित्रै हराउनु भएको त होइन ?
→त्यसो हो भने तपाईंहरूजस्ता मिडियामा काम गर्ने दाजुभाइहरूले बाहिर ल्याउन कसरत गर्नुप¥यो नि त । होइन र ? आफुसंग भएका खुबीहरूलाई बाँड्नको लागि समयले भ्याएसम्म म सधैं नै तत्पर छु जस्तो लाग्छ ।
♦ इजरायल र इराकमा नरसंहार युद्द भैरहेको छ, लाखौँ ख्रीष्टियानहरु घरबार बिहिन भएका छन् हजारौंलाई मारिएका छन् यो घटनाबाट नेपालली इसाईहरुले के सिक्ने ?
→यी खबरहरू सुन्दा ख्रीष्टियान भएको नाताले मात्रै नभएर मानव भएको नाताले पनि निकै दुःख लागेको छ र यसको सर्वत्र भ्रत्सना भइरहेको छ र हुनु पनि पर्छ । अरूलाई ठेस नलाग्ने गरी आफ्नो विश्वासको प्रदर्शना गर्न पाउनु हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । यहाँ सवाल ख्रीष्टियानहरू मारिए भन्ने होइन तर आस्थाकै कारणले गर्दा हिन्दूहरू मारिए भन्ने खबरले पनि हामीलाई बेचैनी बनाउंछ । हामी ईश्वरको सृजना मात्रै होइनौं तर उहाँको प्रतिरूप पनि हौँ । मानिसको रूपमा हामी निकै मूल्यवान् छौं । हामी (नेपालीहरू) निकै संयमी छौं र हुनुपर्छ । ख्रीष्टियानको रूपमा हामीले प्रार्थना गरौँ र कुनै पनि हालतमा द्वन्द्वलाई ठाउं नदिउँ।
♦हामी इसाई कतिको एकतामा छौं त ?
→जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको जस्तो लाग्छ ।निसन्देह एकताले जति फल ल्याउन सक्छ विभाजनले ल्याउन सक्दैन ।
♦ परमेश्वरको महान आज्ञा सुसमाचार सुनाउने अनि चेला बनाउने, कति को लागु भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
→निश्चय नै महान् आज्ञाको एउटा पाटो सुसमाचार सुनाएर चेला बनाउने हो । केहि समयअगि मैले अमेरिकाबाट प्रकाशित एउटा प्रतिवेदन हेरेको थिएँ जसले नेपाललाई सबैभन्दा बेसी ख्रीष्टियमत फैलने राष्ट्रको रूपमा देखाएको छ । यो अर्थमा नेपालमा सुसमाचार सुनाउने काम व्यापक रूपमा नै भइरहेको छ ।
♦ तपाईलाइ लाग्दैन हामि काठमाडौँमा मात्रै सिमित छ भनेर ?
→काठमाडौँमा अवसर बढी भएर होला । तरै पनि हामी खुसी हुनुपर्छ कि छोटो समयको आधुनिक नेपाली मण्डली इतिहासमा पचहत्तरै जिल्लामा कम से कम एउटा मण्डली स्थापना भैसकेको छ भन्ने सुनेको छु ।
♦ दुर दराजमा रहेका मानिसहरु सामु तपाइको कस्तो योगदान रहन्छ त ?
→तिनीहरूले ख्रीष्टियान मिडियामार्फत मेरा लेखहरू पढ्न पाएका छन् । म आफैं पनि बेला बेलामा तालिमको लागि विभिन्न जिल्लामा धाउछु । म व्यक्तिगत रूपमा आशा गर्दछु कि मेरा प्रकाशित किताबहरूले पनि केहि उल्लेखनीय भूमिका अवश्य खेलेका छन् । अहिले त सामाजिक सञ्जालहरूले पनि उनीहरूकहाँ पुग्न पहुँच बनाइदिएका छन् ।
♦ सहि शिक्षा र झुटो सिक्षालाइ कसरि छुट्याउने २ वाक्यमा ?
→आधारभूत ख्रीष्टियान विश्वासको सारलाई नमान्नेहरूलाई हामी झुटा शिक्षा भन्छौं । त्यसो हो भने त्यसलाई मान्नेहरू सही शिक्षामा उभिएका छन् ।
♦ झुटा शिक्षाको बिगबिगी बढेको छ, यसमा तपाइको धारणा के छ नि ?
मेरो बुझाइमा कहिले काहीं हामी यति सङ्कीर्ण अवधारणा लिएर बाच्छौँ कि आफु भन्दा फरकलाई पनि हामी झुटा शिक्षा भन्न पछि पर्दैनौं । कोही झुटो हुनु र फरक हुनुमा नितान्त पृथक छ । सर्वप्रथमतः झुटा शिक्षालाई झुटाको रूपमा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । तिनीहरूले सिकाउने शिक्षाबारे विश्वासीहरूलाई अवगत गराई तिनीहरू कसरी बाइबलअनुसार गलत छन् भनी बुझाउनुपर्छ । बेला बेलामा मण्डलीमा प्रचार गरिनुपर्छ । तर, झुटा शिक्षाको नाउँमा आफूभन्दा फरक सम्प्रदायको निन्दा गर्नु मेरो दृष्टिकोणमा त्यो ख्रीष्टियमत फैलावटको बाधक हुनेछ ।
♦तपाइको भावि योजना के छ ?
→मैले यस विषयमा मूर्त रूपमा केहि सोचेको जस्तो लाग्दैन । तथापि नेपाली ख्रीष्टियानहरू पनि बौद्धिक रूपमा आङ्खनो विश्वासको रक्षा गर्न सकुन भन्ने हेतुले त्यससंग सम्बन्धित केहि पुस्तकहरू निकाल्छु भन्ने लागेको छ । मैले केहि वर्ष अगाडिदेखि येशूको पहिचानसंग जोडिएको पुस्तक लेख्दै छु । परम्परागत विश्वासअनुसार येशूका जीवनीसित जोडिएका केहि कठिन पक्षहरूलाई जवाफ दिने कोसिस हो यो जारी पुस्तक ।
♦ कमल अधिकारीलाई अबको २ वर्षमा कसरि चिन्ने ?
→अरूभन्दा फरक दृष्टिकोणबाट लेख्ने मिहिनेती सिकारु लेखक जसले ख्रीष्टियान आस्थाका कठिन विषयहरूबारे सम्बोधन गर्छ ।
♦ अन्त्यमा तुरही पत्रिका मार्फत पाठकहरुलाई केहि भन्नु छ कि ?
→समय निकालेर यस अन्तर्वार्तालाई पढिदिनुभएकोमा मुरीमुरी धन्यवाद छ । परमेश्वरको अपार अनुग्रह र मेरो मिहिनेतको परिणाम स्वरूप उहाँले मलाई घु¥यानबाट उठाउनुभएको हो भन्ने कुरामा मेरो मनमा कुनै आशङ्का छैन । मेरो जीवनका तिन ओटा सिद्धान्तलाई म यहाँ छोड्न चाहन्छु । अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई मैले सङ्क्षिप्त रूपमा डी.बी.डी. भन्ने गर्छु ।
♣ डन्ट मिस युज द टाइम अर्थात् समयलाई कहिल्यै खेर नफाल्नू ।
♣ बि डिलिजेन्ट । मिहिनेती बन्नुस् ।
♣ डु ह्वाट यु क्यान । जे तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुस् । तपाईंसंग नभएको कुरा भईदिओस् भनी महत्वाकांक्षी बन्नुभन्दा तपाईंसंग भएका खुबी, प्रतिभासाथै सीपहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी हो । मलाई लाग्छ, यी सिद्धान्तहरूले तपाईंलाई सफलतातिर धकेल्नेछन ।
हामी यति सङ्कीर्ण अवधारणा लिएर बाच्छौँ कि आफु भन्दा फरकलाई पनि हामी झुटा शिक्षा भन्न पछि पर्दैनौं । Reviewed by Nepali Christians on Oct 04 . ललितपुर ठैव स्थित इम्मानुयल बाइबल कलेज एण्ड सेमिनारीमा प्राध्यापन सेवा गर्दै आउनुभएका शिक्षक, लेखक तथा अनुवादक श्री कमल अधिकारि ज्यु संग तुरहीको सह-सम्पादक नि ललितपुर ठैव स्थित इम्मानुयल बाइबल कलेज एण्ड सेमिनारीमा प्राध्यापन सेवा गर्दै आउनुभएका शिक्षक, लेखक तथा अनुवादक श्री कमल अधिकारि ज्यु संग तुरहीको सह-सम्पादक नि Rating: 2.5
घरजग्गाको धनी चर्च आफै...“उबेला राज्यबाट सतावट आउँदा प...